दम्पतीबीच कलह किन ? - बडिमालिका खबर
यदि तपाईंहरु पनि एकअर्कालाई तिरस्कार गर्नुहुन्छ भने यसबाट हुने संभावित क्षतिबारे विचार गर्नुहोस् । भोलिका दिनमा तपाईंहरुको दाम्पत्य जीवन कसरी अगाडि बढ्न सक्छ ? तपाईंहरुबाट छोराछोरीले कस्तो अभिभावकत्व पाउँछ ? आफन्त एवं इष्टमित्रका सामुन्ने तपाईंहरु कति निरिह हुनुपर्छ ? ख्याल गर्नुहोस् । त्यसैले एकअर्कालाई उपेक्षा गर्ने, तिरस्कार गर्ने होइन सम्मान गर्ने बानीको विकास गर्नुहोस् । अर्काको भावनालाई आदर गर्नुहोस् ।